‘निर्मला पन्तको बलात्कारी खै ?’ लेखिएको टिसर्ट लगाउने युवकहरु पक्राउ - MILSALLY
Home - Nepali-नेपाली - ‘निर्मला पन्तको बलात्कारी खै ?’ लेखिएको टिसर्ट लगाउने युवकहरु पक्राउ
निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि दोषी पत्ता लाउन सकेको छैन। “हत्यारालाई फासी दे” भन्दै नारा लगाएर पनि नेपाली जनता सडकमा उत्रिए तर हाम्रो देशमा बलात्कारीको पहिचान गर्नै मुस्किल भयो, फासी त कसलाई दिनु र खोइ? यसैगरि बर्दिबासमा बलात्कार विरुद्ध आवाज उठाउदै सडकमा उत्रिएकामाथी गोली प्रहार भयो। एक व्यक्तिले आफ्नो ज्यान समेत गुमाउनु भयो। नेपालमा स्वतन्त्रता चाहिँ अब कसको रह्यो?
नारि स्वतन्त्र भएर हिड्दा बलात्कृत हुन पर्ने, बलात्कार विरुद्ध आवाज उठाउदा गोली खान पर्ने, नेपालमा स्वतन्त्रता कसको रह्यो? उही बलात्कारिको वा उही झुठा भाषण दिएर सोझा जनतालाई उल्लु बनाउने छोटे राजाहरू हाम्रा प्रिय नेता ज्युहरुको मात्र स्वतन्त्रता रह्यो। मैलो समाचार सुने धनगढीको खुला मञ्चमा आयोजना भएको नेकपा ओली समूहको जनसभामा ‘निर्मला पन्तको बलात्कारी खै ?’ लेखिएको टिसर्ट लगाउने युवाहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
मात्र १३ वर्षकी बालिकालाई बलात्कार गरि हत्या गर्ने अपराधीलाई खोज्न नसक्नु सरकारको चुक हो या अपराधीले सरकार बाटै संरक्षण पाएको छ भन्ने कुरा नेपाली जनमानसमा अझैपनि चलिरहेको छ। हामी लागौ अब स्वतन्त्र तर्फ। के नेपाली व्यक्तिलाई आफूले चाहेको टिसर्ट लाउने अधिकार छैन? के ती पक्राउ व्यक्तिहरुको गल्ती थियो त्यो टिसर्ट लगाउनु? या त श्रि ६ ओली सरकार निरंकुश शासन चलाउदै हुनुन्छ? नेपाली जनतालाई चित्त नबुझेका कुरा सरकारसँग नभने को सँग भन्ने ?
Related – “राजा विरेन्द्र सपनामा आउनुभयो र भन्नुभयो ‘येसले मेरो देश बिगार्यो” – कथा
Previous Postराजसंस्था हटाउन मा कसको हात अनि कसको फाइदा?
Next Post“राजा विरेन्द्र सपनामा आउनुभयो र भन्नुभयो ‘येसले मेरो देश बिगार्यो” – कथा